बजारमा आए दुई नयाँ नेपाली बियर - Everest Dainik - News from Nepal
बजारमा आए दुई नयाँ नेपाली बियर
काठमाडौं, चैत २९ । बियरप्रेमीहरुका लागि दुई नयाँ बियरको स्वाद लिने अवसर पाइने भएको छ । यति ब्रुअरीले यसै सातादेखि बजारमा नयाँ “अर्ना लाइट” र “अर्ना स्ट्रङ्ग” बियर ल्याएको हो ।
अर्ना लाइट र अर्ना स्ट्रङ्ग देशभरका सबै प्रमुख लिक्वर आउटलेट, होटल, रेस्टुरेन्ट्, स्टोर तथा पब्हरुमा सर्वत्र उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस बियर र झिङ्गाको यस्तो छ साइनो !
बियरमा क्यालोरी बढी हुने भएकोले मोटाइन्छ या भूँडी बढ्छ भन्ने मान्यता रहेपनि अर्ना लाइट बियर भने नेपालको पहिलो र एकमात्र कम कम क्यालोरी भएको बियर भएको कम्पनीले दावी गरेको छ । स्वादमा कुनैपनि किसिमको असर नपर्ने गरी एक्स्ट्रा क्यालोरी तथा कार्बको मात्रा घटाउनका निम्ति यस बियरलाई २५% सम्म बढि समयको लागि “ब्रिउ” गरिएको यति बु्रअरीले जनाएको छ ।
अर्ना लाइटमा क्यालोरी २०% र कार्ब ३४% कम रहेको कप्मनीका जेनेरल म्यानेजर (सेल्स् तथा मार्केटिङ्ग), अरुण के.सी. ले बताए । “चढ्छ मज्जाले” भन्ने बजार प्रवद्र्धन सन्देशका साथ बजारमा आएको अर्ना स्ट्रङ्गले अर्ना लाइटले जस्तै एक फरक र शानदार स्वादका पस्कने उनले जनाए ।
अर्ना लाइट र अर्ना स्ट्रङ्ग दुवै यति ब्रुअरी प्रा. लि. द्वारा चैनपुर, चितवनमा तयार गरिएको हो र यी बियरहरुमा ६५० मि.लि. बोतलमा क्रमशः ४.६% र ६.५% अल्कोहल रहेको छ ।